Izinyathelo Eziyisisekelo Ezi-5 Zokuqala Ukwakha Uhlu Lwe-imeyili lwakho | Martech Zone
Izinyathelo Eziyisisekelo Ezi-5 Zokuqala Ukwakha Uhlu Lwe-imeyili Lakho
NgoLwesihlanu, Okthoba 17, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Enye yezindlela ezilula zokuqinisekisa ukuthi i- ukukhishwa kwe-imeyili ihlala ime kahle - okusho ukuthi i-imeyili yakho iyifaka ebhokisini lemilayezo engenayo, hhayi ifolda engenamsoco, ngokuba nendlela ephephile necacile yokuqoqa amakheli e-imeyili. Noma yini engaphandle kwefomu lokungena ngokusobala elixhumana nomnikelo futhi lisetha okulindelwe kokubhaliselwe (kuvezwe vs kushiwo imvume) kungathinta amathuba okuthi umamukeli angachofoza inkinobho ye-SPAM. Futhi lapho bekwenza, kungathinta ikhono lakho lokuthola ama-imeyili kubhokisi lokungenayo labo bonke abanye ababhalisile.
Kungabonakala sengathi ukwakha uhlu lokungena kusuka ekuqaleni kuwumsebenzi odinga kakhulu njalo, kepha kuyadingeka impela. Lapho wakha uhlu ngokufanele, uzoba nezithameli ezibanjiwe ezilungele ukuzwa ukuthi uthini. Nazi izinyathelo ezi-5 ezilula eziyimishini eyinhloko yokwakha uhlu lwababhalisile abathembekile. Funda udaba oluphelele lapha.
I-imeyili Ithunyelwe iyinkampani yokubonisana ngokuhlinzekwa. Sabelane ngemininingwane eminingi ngokulethwa lapha Martech Zone - qiniseka ukuhlola okwethu abaxhasi ku-250ok uma ungathanda ithuluzi lamathuluzi eliphelele ukukusiza! Lesi yizinyathelo ezi-5 eziyisisekelo eziqinile okufanele zibe yisisekelo sawo wonke amawebhusayithi kanye nohlelo lokumaketha online - ikhono lokukhetha kalula ababhalisile ongaxhumana nabo njalo ngenhloso yokwakha ubudlelwane bebhizinisi ngokuzayo.
Isihluthulelo sokuqala ukwakha uhlu lwakho lwe-imeyili
Itimu esemqoka kokungena kwakho kufanele kube ukuthola ukuthi yini ephazamisa ithemba lakho, ubanikeze okuthile ukuxazulula inkinga bese uletha inani langempela ngohlelo lwakho lwe-imeyili ukuze uqhubeke nokwakha ubudlelwano.
Khomba abakufunayo futhi ubayenge ukuba bangene ngokuhweba… ukubhalisela kwabo i-goodie.
Dala ikhasi lokufika elinesihloko esifushane nokunikezwa.
Engeza ifomu elizoqoqa ikheli labo le-imeyili nolwazi olwengeziwe.
test ifomu lakho! Sisebenze namakhasimende amaningi angakaze ahlole ifomu lawo ngaphandle… futhi aphukile!
Shayela ithrafikhi futhi ulandelele ukuguqulwa kwakho ukuthola inani lababhalisile bakho nezinga labo lokuguqulwa.
Ithiphu eyodwa eqinisile… ungavele unikeze i-goodie yakho ngokuhambisa ifomu. Qiniseka ukuthi thumela i-imeyili ku-goodie, ngaleyo ndlela uqinisekisa ukuthi umuntu usebenzise ikheli le-imeyili elivumelekile! Uma nje uhlelo lwe-imeyili lunezisekelo, nakhu Izindlela eziyi-15 zokukhulisa uhlu lwakho lwe-imeyili!
Tags: uhlu lwe-imeyliukungena nge-imeyiliimeyili ubhaliseimeyili bhalisela ifomuobhalisile nge-imeyilikhulisa uhlu lwakho lwe-imeyilikhulisa uhlu lwakhokhulisa uhlu lwakho lwababhalisilebhalisa imikhuba emihle kakhulu yefomuifomu lokubhalisauhlu lwababhalisile
Izizathu zokuthi kungani i-CEO yakho Kufanele Ibe Ku-Social Media
Ngaphandle Kokulandelwa Kwezingcingo, Umkhankaso Wakho Wokuhlinzeka Ukhula Ngokunembile